“Ma aanan waayin Ballon d’Or, ee Ballon d’Or ayaa aniga i waayay” – Zlatan Ibrahimovic – Gool FM
“Ma aanan waayin Ballon d’Or, ee Ballon d’Or ayaa aniga i waayay” – Zlatan Ibrahimovic
Ahmed Nur September 12, 2021
(Milan) 12 Sebt 2021. Ma ahan wax ugub ah inuu Zlatan Ibrahimovic ku hadaaqo ereyo abuuri kara hadal heyn xooggan, haatanna waxa uu aaraah ku darsaday inuusan weligii ku guuleysan abaal-marinta xiddiga ugu wanaagsan sanadka ee Ballon d’Or oo ay bixiso majaladda France Football.
Weeraryahanka AC Milan ayaa sheegay inuu isagu yahay kan ugu wanaagsan kubadda cagta taasna aysan u baahneyn abaal-marin caddeyn u noqota.
“Ma aanan waayin Ballon d’Or, ee Ballon d’Or ayaa aniga i heli waayay” ayuu yiri isagoo warreysi siinayay jariiradda France Football oo abaal-marinta bixisa.
“Dhammaanteen waxaan u baahannahay abaal-marin sheegeysa inaad tahay kan ugu wanaagsan, balse gudaha waxaan ka dareemayaa inaan aniga ahay midka ugu fiican, sharaf ayay ahaan lahayd ku guuleysigeeda, balse codeeyeyaasha ayaa go’aamiya” ayuu hadalkiisa ku daray laacibka reer Sweden.
Zlatan ayaa sidoo kale sheegay inaysan laacib wanaagsan ka dhigi karin kaliya inuu ku guuleysto Koobka Adduunka iyo Champions League.
Iska illow Erling Haaland, Man City iyo Liverpool oo ku dagaallamaya saxiixa xiddig muhiim u ah Borussia Dortmund
Miyuu Sir Alex Ferguson ka qayb qaatay in Cristiano Ronaldo uu kusoo laabto Manchester United?... (Macallinkii hore ee Red Devils oo arrintaas ka jawaabay)